I-inshurensi yesanti yesiphepho iiHacks Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack- Gamepron
Inkanyamba yesaqhwithi ethubeleza
Fumana lonke olona nyango luphambili: IHoldstorm Hacks kanye apha kwiGamePron! Sine # 1 Aimbot, iWallhack, i-ESP, nayo nayiphi na into onokuyicinga xa kuziwa ekukopeni.
Sele uyithengile iMvukelo yeSandstorm Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge ii-Insurgency Sandstorm hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, nto leyo ethetha ukuba unokuzisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Inkanyamba yesaqhwithi Hacks
Uqhushululu Sandstorm Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Inkanyamba yesaqhwithi IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ujonge ukungena kuwo kukhetho lwethu olubanzi lwezihloko apha kwiGamePron
Khetha i-hack ehambelana neemfuno zakho ezilungileyo (sinezinto ezininzi onokukhetha kuzo!)
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iprosesa yethu ekhethekileyo kunye ne-100% yenkqubo yokuhlawula ekhuselekileyo apha kwiGamePron
Nje ukuba uhlawule, ungafumana ukukopela usebenzisa isitshixo semveliso yakho!
Kutheni le nto i-Gamepron Insurgency: I-Sandstorm hacks?
Uqhushululu: Isitshingitshane esineSandstor ngumdubuli wasemkhosini owawenzelwe ukuvuza kuphela abadlali abanamava ngeenxa zonke. Nangona umdlalo uhlaziyiwe ngokuqhubekayo, oko akuthethi ukuba izixhobo zethu azizukubaluleka! Sisoloko sihlaziya izixhobo ngokwethu ukuqinisekisa ukuba azisebenzi kuphela kodwa ziyahlangabezana nemigangatho ephezulu yabasebenzisi beMidlaloPron. Abanye abaphuhlisi behack abayi kuzikhathaza ngokuhlaziya izixhobo zabo, kwaye konke okudingayo kukuhlaziya okukodwa kokuvelisa iimveliso zabo zingenamsebenzi; ayisoze yenzeka apha kwiGamePron. Kungenxa yoko le nto abantu bethembele kuthi ngoQhushululu: I-Sandstorm Hack iimfuno, njengoko zisazi ukuba sibonelela ngezixhobo eziza kusebenza kakuhle kwikamva elibonakalayo!
Ukufumana ukufikelela kwisixhobo esinokuthi kuthathwe ngokuba "kugcwele okupheleleyo" kubalulekile ngokunjalo. Xa ushiywe ngesixhobo esibonelela kancinci ngokubhekisele kwinani leempawu ezikhoyo, abasebenzisi abazukufumana iziphumo abazilangazelelayo. Isizathu sokukopela kukuba ube nempumelelo engakumbi ngelixa udlala, enokuthi ibaluleke kakhulu kumdlalo onje nge-Insurgency: Sandstorm. Ukwenza izigqibo ezikhawulezileyo kunye nokulungelelanisa iliso lesandla ngokugqibeleleyo akuyi kuba sisuti esomeleleyo kuye wonke umntu, kodwa ngombulelo, unokwenza i-Insurgency yethu: I-Sandstorm Zero Hack kwaye uyenzele yona! Ngelixa usenokungabinazo izakhono ezifunekayo zokugcina nabona badlali babalaseleyo okwangoku, ekuphela kwento emi phakathi kwakho kunye nobukhulu iya kuba kukuNgxamiseka kwethu: Isanti yesiqhwithi Zero Cheat.
Ukhuseleko olufumaneka kuzo zonke izixhobo zethu kuhlala kungananzwa, kodwa abo bazimisele malunga neendlela zabo zokukhwabanisa bayazi ukuba kubaluleke kangakanani. Xa unokukopa ngaphandle kokuziva uxinzelelo lwezinto ezinokubanjiswa, uya kufumana elona thuba liphezulu kumava akho okudlala. Nokuba usebenzisa isixhobo sethu ukwenza ukuziphindezela okanye ube ngcono kumdlalo akunamsebenzi, njengoko uhlala uhlala ukhuselekile nokuba ungakhathalelwa. Iinkonzo zokukopela ezizenzekelayo azinakuze zibone i-Insurgency: I-Sandstorm Zero Hack, ethetha ukuba ukhululekile ukuba uzame ukuthanda kwakho ngendlela othanda ngayo!
Ukugcina izinto zilula kubalulekile kuthi, njengoko siqonda ukuba abasebenzisi abatsha bajonge ukukopela mihla le. Ukuba awuzange ufake okanye uthenge i-hack kwixesha elidlulileyo, kunokubonakala ngathi ngumsebenzi onzima; ikwayiloo nto ukuba woyike ukucela uncedo kuyo. Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nale nto apha kwi-GamePron, njengoko izixhobo zethu ziyilelwe ukubonelela ngenkqubo elula yokufaka.
I-inshurensi yesaqhwithi sodonga lwentaba (ESP)
Ulwazi lomdlali we-insurgency Sandstorm ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
I-inshurensi yesanti yesiphepho Into ye-ESP eneefilitha
Uqhanqalazo lweSandstorm Aimbot
Izilumkiso zesilumkiso sotshaba lwesaqhwithi
Imeko yokubaleka yesanti yesiphepho imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Ukunyanzeliswa kwesithambo sesaqhwithi kunye neenjongo eziphambili ezinokuqwalaselwa.
Uqhekeko lwesaqhwithi sesaqhwithi siphinda sibuyekeze umbuyekezo
Ngokufanelekileyo Inkanyamba yesaqhwithi yimfumba Iimbonakalo
Imvukelo: Umdlali weSandstorm ESP
Umdlali we-ESP uza kukuvumela ukuba ukhangele indawo ekungqongileyo kwaye ubone indawo ezikuyo zombini iintshaba kunye neqela. Yibone yonke nge-Player ESP!
Uqhushululu: Ingcaciso yabadlali beSandstorm ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Ulwazi loMdlali i-ESP iya kukuvumela ukuba ufumane igama, ibha yezempilo, kunye nomgama xa kufikwa kwiintshaba kunye nabalingane kwimephu.
Uqhushululu: Into yesanti yesiqhwithi ESP eneefilitha
Into ye-ESP enezihluzi inokusetyenziselwa ukuqaphela eyona nto iluncedo kakhulu kumdlalo, ukuze ungachithi ixesha lakho ngayo nayiphi na enye into!
Uqhushululu: Isitshingitshane iAimbot
Sebenzisa i-Insurgency: ISandstorm Aimbot ukuphumelela yonke imipu yakho, nokuba ngubani oza kufumana iibhola zakho.
Uqhushululu: Ithrekhi yeSandstorm Bullet (esebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Umkhondo weBullet ungasetyenziselwa iimfazwe ezimfutshane kunye neziphakathi, ekuvumela ukuba ubone apho iibhulethi zakho zinempembelelo khona.
Uqhushululu: Isilumkiso sotshaba esilumkisayo
Isilumkiso sotshaba luphawu oluya kulumkisa umsebenzisi ngomyalezo owenzelwe wena othi gqi kwiscreen sakho! Iya kubonakala xa ingozi isondele (iintshaba zisondele okanye zijolise kuwe).
Uqhushululu: Imozulu yesanti enkulu yokutsiba (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Imowudi yokutsiba Super ilungele nabani na ojonge ukwenza izinto. Ukuwa komonakalo akusengokukhathazeka kwakho ngeli nqaku linikwe amandla!
Ukunyanzeliswa: Isithambo sesaqhwithi kunye neenjongo eziphambili ezinokuqwalaselwa
Ukukhetha apho ungathanda ukuba i-aimbot yethu ijolise kwiintshaba zakho akukaze kube lula oku! Unokukhetha apho i-aimbot iza kugxila khona emlilweni, kunye nezinye iindlela.
Uqhushululu: Isanti yesiphepho eyimbonakalo ebonakalayo ebonakalayo
UkuKhangela okubonakalayo yinto eluncedo eya kuthi ithintele iAimbot yethu ekujoliseni iintshaba ngeendonga, ikunike ukuziva kwendalo ngakumbi ngelixa i-hack yethu ivuliwe.
Uqhushululu: Isaqhwithi siphinda sibuye umbuyekezo
Ukuphinda ubuye yingxaki ebonakalayo enokususwa ngokulula kumdlalo, konke okufuneka ukwenze kunikwe amandla uMbuyekezo weMpompozo!
Ukuba ngoyena mntu ungxamisekileyo: Umdlali weSandstorm onokufezekiswa ngokulula apha kwiGamePron. Ngelixa oogxa bakho beya kuchitha iiyure ezingabalekiyo ebomini babo bezama ukuqonda umdlalo, unokwenza ukuba ukukopela kwethu kubabethe ngalo lonke ixesha! Nokuba ungalunceda kangakanani uncedo, usebenzisa i-Insurgency: I-Sandstorm Hack inokuhlengahlengiswa ukuze ihambelane nazo zonke iimfuno zakho. Umdlalo wePron ngokwenene unayo yonke into!
Uqhushululu oQhelekileyo: IiHackstorm Hacks kunye nokukhohlisa
Uqhushululu: I-ESP kunye neWallhack
Olunye Uqhushululu: IiHacks zesaqhwithi kunye nokukhohlisa
Eyona Insurgency ithandwayo: I-Sandstorm Zero Hack kunye ne-cheats zifunyenwe apha kwi-GamePron, njengoko sizinikezele ekunikezeleni abasebenzisi bethu ii-cheats ezinokuthenjwa ixesha elide. Akuzange kubekho lixa apho sibonelela ngobuqhophololo obuswelekileyo, kwaye loo nto isivumele ukuba sakhe igama lokuba ngumboneleli # 1 wee-hacks ezikwi-Intanethi. Uqhushululu: Isitshingitshane ngumdlalo ongenasiseko somdlali sikhulu ngokwaneleyo sokuqinisekisa ukuphuhliswa kwesixhobo kwezinye iinkampani, kodwa ayisiyiyo indlela esivakalelwa ngayo! Siyaqonda ukuba kukho isidingo esikhulu sokunyanzelwa okuphezulu: Isanti yesaqhwithi ukukopela phaya, yiyo loo nto kwavakala kulungile ukuphosa umnqwazi wethu kumxube.
Zonke izinto ezifunwa kakhulu emva koku zifunyanwa kwi-Insurgency: I-Sandstorm Zero Hack, ke nokuba ujonge ukufeza ntoni, i-GamePron iya kuba nakho ukukunceda. Kutheni uzikhathaza ngokusebenza nomboneleli owahlukileyo onokuthi akuphoxe?
Ii-Aimbots zihlala esinye sezona zixhobo zibalulekileyo zibandakanyiwe ngaphakathi kwimidlalo yokudubula ukusukela oko zazikho, kwaye izizathu zicacile. Nanini na xa udibana notshaba ngelixa udlala i-Insurgency: I-Sandstorm, iimfazwe zinokubonakala zitsaliwe ngamanye amaxesha. Inqanaba lokwenyani likho ngokuqinisekileyo, kodwa kuthekani ukuba ufuna ukuzilahla ngokukhawuleza? Uqhushululu lwethu: Isivunguvungu uZero Aimbot unawo onke amanqaku afunekayo ukukhupha abachasi bakho ngokukhawuleza, kwaye ungenza amava ngokwakho ukuze uqiniseke ukuba uhlala wanelisekile. Kukho amaxesha apho ungazokwazi ukuhlengahlengisa indawo ekujolise kuyo i-aimbot, okanye nokuba isebenza kakuhle kangakanani-enkosi, akunjalo apha kwi-GamePron.
Unokwenza ubungakanani beSangqa sakho se-FOV, ukukunika indawo enkulu apho iintshaba zijolise khona ngokuzenzekelayo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa unokutshintsha nje i-aimbot ucime / ucime ngokuthanda kwakho, ikunike isicwangciso sokubaleka ngokukhawuleza!
I-ESP kunye neWallhacks zizinto oya kuthi uzibone kuzo zonke iihacks zemidlalo yokudubula. Xa ubona utshaba phambi kokuba babe nethuba lokukubona, kulula kakhulu ukuphumelela! Awuzukukwazi ukubadubula ngaphandle kokukhathazeka ngokuziphindezela, kodwa ikunika ithuba lokuseta imigibe kunye neembumbulu. Ukusebenza kunye nabalingane bakho kunxweme ngaphandle komthungo kumdlalo kulula nge-Insurgency yethu: ISandstorm Zero ESP kunye neWallhack! Unokusebenzisa eli nqaku ukuchonga iintshaba ezibuthathaka ezikufutshane nawe, njengoko unokubona zombini imivalo yezempilo kunye nomgama usebenzisa i-Player Info ESP.
I-Wallhacks inokukuthintela ekuhambeni uye kwindawo eyingozi kuba uya kuba nakho ukubona ukuba ngaba kukho inani leentshaba elijolise kuyo nayiphi na indawo. Izixhobo zokuqhushumba kunye nezinye izinto eziyingozi zinokuchongwa zisebenzisa i-Item ESP (eneefilitha)!
Ukuprintwa luphawu oluncedo kakhulu olunokufumaneka apha kwiGamePron. Ngaba wakha wazibuza ukuba uya kuba lula kangakanani umdlalo ukuba ungasondela kwizinto ngokungathi uzingela inyamakazi? Ukulandela umkhondo weenyawo zabachasi bakho kuya kuba luncedo olukhulu kubasebenzisi abaninzi, kwaye ngoku wenza kanye loo nto ngeFointprint feature! Oku kusebenza ngesandla kunye noMonakalo oMkhulu kunye neeHacks zoMgama, njengoko unokwazi ukubona ukuba ikusondele kangakanani into ekujolise kuyo ngokwenza umgama kwaye uqaphele inombolo. Njengoko usondela kwindawo ekujolise kuyo kwaye uzilazile usondele, emva koko unokwenza umonakalo omkhulu ukuba uqiniseke ukuba uza kuzikhupha xa kufika ixesha. Ukuchitha lonke elo xesha ukoyizela ngokuchasene nabachasi bakho kuphela ukuba uhlangatyezwe kukufa ayikucaphukisi kuphela kodwa kukwayinkcitho enkulu yexesha.
Yiba ngumzingeli osebenzayo kwaye uthabathe abachasi bakho ngokuthanda kwakho ngokufikelela kwi-Insurgency: Sandstorm Cheats!
Ukuba kukho naziphi na izinto ezongezelelweyo onethemba lokuzibona zibandakanyiwe kwesi sixhobo, sazise. Njengoko besesitshilo ngaphambili, sihlala sihlaziya izixhobo zethu ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi beMidlaloPron bafumana okona kuzona mveliso zabo. Ukuba enye yeempawu
ukhangela ayifakwanga kuhlaziyo olutsha, sihlala sivulekile kwiingcebiso! Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sele sibandakanya amanqaku ongezelelweyo angafumaneki kwenye indawo.
Umzekelo, uKususa ayisiyonto ifunyanwa ngokuqhelekileyo. Ungasusa kokubuyela umva kwaye ujikeleze kuyo yonke imipu yakho ngelixa udlala i-Insurgency: Sandstorm, yonke into oyifunayo kukukopela kwethu! Ukujonga okubonakalayo kuya kukuthintela ekudubuleni iintshaba ezisazifihle ngasemva kweendonga, oko kuthetha ukuba akufuneki ukhathazeke ngabantu abanokubakhupha njengomkhohlisi. Olu qhekeko luya kujonga njengomdlali oqhelekileyo, abazi ukuba unamaqhinga ambalwa kwimikhono yakho!
Uqhushululu: IiHacks zesaqhwithi imibuzo
Uqhushululu: IHackstorm Hacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Kutheni Inshurensi yethu: IiHackstorm Hacks
Ukuba kuya kufuneka uzibuze ukuba kutheni sithathwa njengeyona ilungileyo, ngekhe usebenze ngeGamePron ngaphambili. Nawuphi na umntu ozama izixhobo zethu ngokwabo uya kusiqonda isizathu sokuba sigcinwe ngokuhlonitshwa kangaka kumzi-mveliso wokugenca! Xa ufuna iziphumo, ayikho enye indawo onokujika kuyo! Inkampani yethu siyakhe ngodumo oluthanda umgangatho, ngokuchasene nokwaziwa njengenkampani "elambele imali".
Kutheni Insurgency yethu: Iqhwithi leSandstorm iAimbot
Ii-Aimbots ziya kwenza amava abe yinto eyonwabisayo ngaphandle kwenqanaba lakho lesakhono, njengoko ungakhathazeki malunga nokuzama kwabadlali abazokuthatha. Ungahlala ukhuphisana nokuba ungubani na xa kuthelekiswa naye, njengo-Insurgency: Isandstorm Zero Aimbot phantse ayinakwenzeka ukuba ibhetele. Unokukhetha apho ufuna ukuba i-aimbot ijolise kwimizimba yabachasi bakho, ke zive ukhululekile ukuvumela ukucinga kwakho kusebenze ngokungalawuleki.
Kutheni Insurgency yethu: Sandstorm ESP
I-ESP imele ukuBonwa okuNgezelelweyo kokuqonda, nto leyo eyenye ingcinga yokuba ngekhe ube nakho ngenye indlela. Uhlala unamathele kwi-5, kodwa ukusebenzisa izixhobo zethu kukunika umbono we-6! Ungazibona iintshaba zakho ngeendonga kunye neendawo eziqinileyo ngokujonga amathambo abo, kwaye akho amaxesha apho kuya kuhlawula khona ukwazi apho bakhoyo abadlali beqela.
Kutheni Insurgency yethu: Sandstorm Wallhack
I-Wallhacks ifana nenqaku le-ESP, ngaphandle kokuba bathambekele ekugxileni ekufumaneni iintshaba kunye neqela labo ngokuchaseneyo nokuchonga izinto eziluncedo (okanye eziyingozi!). Unako ukuhlala uyazi indawo zeentshaba xa usebenzisa i-Insurgency: Sandstorm Zero Wallhack, kwaye izakuhlawula ekuhambeni kwexesha. Ngokwazi indawo yotshaba lwakho, unokucwangcisa kwaye wenze ukudlala okuhle kuyo yonke indlela! Imidlalo yokuphumelela ayikaze ibe lula.
Kutheni Insurgency yethu: Sandstorm Norecoil
Ukuphinda ubuye kunokuba sisinambuzane esincinci ngamanye amaxesha, kwaye akho amanye amaxesha apho kuya kukubulala ngokunyanisekileyo. Yisuse kwi-equation ngokwenza ukuba umsebenzi we-NoRecoil usebenze kwi-Insurgency yethu: I-Sandstorm Zero Hack! Ayinamsebenzi ukuba sisixhobo esiphi na oceba ukusisebenzisa, njengoko ukubuyela kwakhona kungasuswa ngaphandle kobungakanani okanye uhlobo lwembumbulu. Ngamanye amaxesha awuyi kufuna nokwenza i-aimbot!
Ungayikhuphela njani eyona insurgency: I-hormst hacks?
Ukukhuphela i-Insurgency: I-Sandstorm Hacks ihlala ingumsebenzi onzima kubantu abafikayo, kwaye yinto esifuna ukuyiphepha apha kwi-GamePron. Sisebenzisa inkonzo ephambili yemveliso, ke xa sele uthengile imveliso yakho inokusetyenziselwa ukufikelela kwisixhobo uqobo. Ukusuka apha, ucofa nje iqhosha u "Landa" kwaye uhambe ngenkqubo yokufaka ezenzekelayo!
Kutheni le nto i-Insurgency yakho: I-Sandstorm hacks ibiza kakhulu kunezinye
Amaxabiso ahlala esiba sisihloko sengxoxo apha kwiGamePron, njengoko sithathwa njenge- "inkonzo yokuqhekezwa kwepremiyamu". Kukho izixhobo apho ezingabizi kakhulu, okanye zikhululeke kwezinye iimeko, kodwa akukho nanye kuzo eya kuthi ihambise uhlobo lwamandla afunyenwe kwi-Insurgency yethu: Sandstorm Zero Cheat. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa izixhobo zethu zikhuselekile nge-100% kwaye ziya kuyigcina ikhuselekile iakhawunti yakho kuzo zonke iindawo zakho zokukopela!
Sinexesha eliqingqiweyo elihambelana neemfuno zakho, nokuba uza kuthatha ixesha elingakanani (okanye elifutshane) ukukopela. Ukufumana ukufikelela ekukhohliseni kwethu kwimpelaveki yokhuphiswano, okanye ukuzibophelela ekuthabatheni ixesha elide kwaye ube ngumphangi! Sinosuku oluyi-1, i-1-veki, kunye nenyanga ye-1 yemveliso engundoqo kubo bonke abasebenzisi beMidlaloPron, ke uya kukhetha ukuba ufuna izinto zibe bhetyebhetye kangakanani.
Onyuliweyo wethu I-Insurgency: Isanti Hacks
Kuhle I-Insurgency: Isanti yimfumba Iimbonakalo